extruded acrylic sheet Vagadziri & vanotengesa - China extruded acrylic sheet fekitori
Yakaburitswa pachena yakajeka acrylic bhodhi inoshandisa yepamusoro yekuumba epurasitiki PMMA yemabhizinesi anozivikanwa kumba nekune dzimwe nyika senge mbishi zvinhu uye inotora nzira yekuwedzeredza yekukura kukuru nemidziyo yepamberi. Chigadzirwa chine kushivirira kudiki zvakanyanya uye kudhura kuita.
1mm Acrylic Sheet rakabudiswa Acrylic machira anogadzirwa neyakaenderera yekugadzira maitiro. Acrylic kana PMMA pellets anodyiswa kubva kumudziyo silo kune feed feeder pamusoro peiyo extruder tambo.
Acrylic inonziwo PMMA inogadzirwa nemethacrylate methyl ester monomer. Iine hunhu hwekujeka pachena, kugadzikana kwemakemikari, mamiriro ekunze-kugona, nyore kusviba, kugadzirisa nyore uye kutaridzika kwakanaka, Yakave ichishandiswa zvakanyanya mukuvaka, fanicha uye kushambadzira maindasitiri.